I-beta yesibini ye-Android 7 ye-Samsung Galaxy S7 kunye ne-S7 Edge | Iindaba zeGajethi
I-beta yesibini ye-Android 7 ye-Samsung Galaxy S7 kunye ne-S7 Edge
Inkampani yaseMzantsi Korea ilandela eyayo ngokweenguqulelo ezintsha zezixhobo zayo kwaye abanye abasebenzisi sele benika ingxelo yokuba inguqulelo yesibini ye-Android 7 Nougat vein iza kwizixhobo ze-Samsung Galaxy S7 kunye ne-S7 Edge. Ngeli xesha lolunye uguqulelo oludityanisiweyo phakathi kwabasebenzisi abasele befumene uguqulelo lwe-beta ngexesha elithile eladlulayo, ke ayingabo bonke abasebenzisi abanokufikelela kuhlobo lwe-beta olusungulwe, kodwa abo sele befumene ingxelo yokuqala bayakufumaneka. abakabikho) fumana i-beta yesibini nge-OTA.
Ngale ndlela, sinomsindo "onomsindo" ngezi nguqulelo ze-beta kuba azifumaneki kuwo onke amazwe ezwekazi elidala kwaye asiluthandi olu hlobo lokuhamba nangona luqondwa. Kwelinye icala kunokwenzeka ukufakela ezi betas kwizixhobo Nangona isemthethweni, kodwa le yinto andicebisi ukuba ndiyenze.
Inguqulelo entsha ye-beta yongeza ezinye izinto eziphuculweyo malunga nokusebenza kunye nozinzo lwenkqubo, mhlawumbi kancinci xa sijonga ubunqabileyo be-92 MB yendawo ekule nguqulo intsha isungulwe yinkampani uqobo. Ngayiphi na imeko sijamelene neendaba ezimnandi kakhulu kwaye siyathemba ukuba inqanaba lokwamkelwa kwale Android 7 Nougat entsha liza kunyuka kakhulu kunyaka olandelayo we-2017, into eqhubeka nokuxhathisa iiterminal ze-Android ngaphandle kokuba ziimodeli zamva nje. Mhlawumbi nakwabo bafumana ezi betas ezinje nge-S7 kunye ne-S7 Edge okanye I-OnePlus 3 kunye ne-3T sikwalumkisile izolo, ingxelo entsha ibonakala ifumaneka nangaphambi kokuphela konyaka. Lixesha lokuba ulinde ithutyana.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-beta yesibini ye-Android 7 ye-Samsung Galaxy S7 kunye ne-S7 Edge
"IPlanethi Coaster" ipaki entsha yokuzihlaziya yesimulator
I-selfie craze iza kwiibhotile zeCoca-Cola, nzulu